Qarax kale oo weyn oo ka dhacay Kismaayo, xili laamaha amaanka ay shir jaraa’id qabanayeen. | XAL DOON
Home NEWS Qarax kale oo weyn oo ka dhacay Kismaayo, xili laamaha amaanka ay...
Qarax kale oo weyn oo ka dhacay Kismaayo, xili laamaha amaanka ay shir jaraa’id qabanayeen.
Wararkii u danbeeyay ee naga soo gaaray magaalada Kismaayo, ayaa sheegaya in goordhow qarax kale oo weyn uu ka dhacay isla goobta weerarka uu ka socdo, kaasoo jugtiisa si weyn looga maqlay magaalada Kismaayo.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in gaariga qarxay ay u badan tahay inuu ahaa midka ay ka dagteen raggii gudaha u galay Hoteelka akdib markii uu dhacay qarixii Koowaad, kaasoo lagu dhuftay Albaabka laga galo hoteelka lagu jiro.
Wararka waxa ay sidoo kale tilmaamayaan in xiliga qaraxa 2-aad uu dhacayay ay shir jaraa’id qabanayeen laamaha amaanka, kuwaasoo ku faanayay iney soo afjareen weerarka, waxaana xiligaasi si gaar ah u hadlayay Afhayeenka Laamaha amaanka ee Jubaland oo sida muuqaalo la soo bandhigay ay muujinayeen sheegayay in weerarka la soo afjaray.
Qaraxa kadib, waxaa durba bilaabatay rasaas xooggan oo ay ridayeen qaar kamid ah dableydii gudaha Hoteelka ka dagaalameysay, kuwaasoo u muuqday iney meel ku gabanayeen oo rasaasta iyo Bambooyinkii ay ridayeen joojiyay, balse markii danbe dib u bilaabay.
Xaalada magaalada Kismaayo ayaa Caawa ah mid kacsan, waxaana magaalada ay iskeed isaga gashay bandow, iyadoo Isbitaaladana ay buux dhaafiyeen bukaano dhaawacyo kala duwan qabo, kuwaasoo ay baadi goobayaan eheladooda.